Lucky7ကစားနည်းလည်ပတ်ပုံ-Lucky7 Casino-Lucky7Shan Koe Mee-Lucky7 ရှမ်းကိုးမီး
Lucky7ရှမ်းကိုးသီး၏စည်းကမ်းများ။ Lucky7ရှမ်းကိုးသီးဂိမ်း ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ?
လောင်းကြေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အပျော်သဘောပဲဖြစ်ဖြစ် ကစားရတာ လွယ်ကူပြီးနားလည်ရလွယ်တာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံအပြင် အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကပါ စိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။
သိုသော်လည်း ရှမ်းကိုးမီးကိုကစားဖိုအတွက် တိကျတဲ့ Rule ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိတဲ့အတွက် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးလက်ဆင့်ကမ်းပြီးဆော့ကစားလာတာ ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ စည်းမျဉ်းတွေကလဲ
Lucky7ကစားနည်းလည်ပတ်ပုံ
ပွဲမပြီးမချင်း (သို) မကုန်မချင်း ဘဏ်မှာထည့်ထားတဲ့ပိုက်ဆံကို ဒိုင်ကထပ်ပေါင်းခွင့် ထုတ်ယူခွင့်မရှိပဲနဲ့ အလျော်အစားမှန်သမျှကို ဘဏ်ထဲကလုပ်ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အချိုဝိုင်းတွေမှာဆိုရင် ဒိုင်ကဘဏ်ထဲကပိုက်ဆံတွေအကုန် တစ်လှည့်ထဲနဲ့ရှုးသွားခဲ့ရင် ဘဏ်ထဲကပမာဏထက် ၂ဆ ထပ်ထည့်ပြီးဒိုင်ဆက်လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။
ဒီနည်းကတော့ ဝိုင်းအချိုမှာပဲတွေ့ရတာပါနော်။ သူ့ရဲ့ဘဏ်ထဲထည့်ထားတဲ့ ပမာဏက ၁၀၀၀ကျပ် ဆိုရင် ကစားသူတွေက အနည်းဆုံး ဘဏ်ပမာဏရဲ့ ၁၀% ကိုထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ၁၀၀ အနိမ့်ဆုံးထည့်ကိုထည့်ရမှာပါ။
ဘဏ်ထဲမှာပိုက်ဆံမရှိတော့ဘူးဆိုရင် တော့ ဒိုင်ကိုနောက်တစ်ယောက်ပြောင်းရပြီးတော့ ဘဏ်ထဲကပိုက်ဆံသာ ၃ဆ ဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် “Warning (ဝမ်တိမ်)” ၃လှည့်ခေါ်ခွင့်ရှိသွားတာမို ဒိုင်ကသာ “Warning (ဝမ်တိမ်)”
ကျွန်တော်တိုခေါ်နေကြကတော့ ပထမတိမ်၊ ဒုတိယတိမ်၊ နောက်ဆုံးတိမ် လိုဆိုပေမယ့် ဒေသအလိုက်အခေါ်အဝေါ်တွေတော့ကွဲတာပေါ့။ နောက်ဆုံးတိမ်အပြီးမှာ ဘဏ်ထဲဘယ်လောက်ပဲကျန်ကျန် ဒိုင်ကအကုန်ရယူနိုင်တာပါ။
Lucky7ရှမ်းကိုးမီးစည်းမျဉ်းများ
အဲ့တော့ ဥပမာ ဖဲချပ်ပေါင်းလို 17 ရတယ်ဆိုရင် “7”, 24 ရတယ်ဆိုရင် “4”, 32 ရတယ်ဆိုရင် “2” အဲ့လိုမျိုးအနောက် ကိန်းတွေကိုပဲယူရတာပါ။
အဲ့လိုမျိုး အနောက်ကိန်းကတူနေခဲ့မယ်ဆိုရင် အနိုင်အရှုးကို ၂ချပ်သမားလား ၃ချပ်သမားလား အရင်ကြည့်ရတယ်။ ဥပမာ7ချင်းတူနေပေမယ့်လဲ ၂ချပ်ထဲနဲ့7ရတဲ့သူက ၃ချပ်နဲ့7ရတဲ့သူကိုနိုင်တယ်။
နောက်ပြီးတော့ ရှမ်းကိုးမီးမှာ ဖဲပွတ်ရတဲ့အဓိက Feeling ကဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အပွင့်တူရင် ဆတိုးတွေရနိုင်တာမိုပါ။ ဖဲ၂ချပ်မှာ အပွင့်တူ ၂ချပ် (ဥပမာ – ဒေါင့် + ဒေါင့်) ဆိုရင်ကိုယ့်လောင်းကြေးရဲ့ ၂ဆ၊ အပွင့်တူ ၃ချပ်
ပြီးရင်တော့ဒိုင်က ကိုယ် Catch(ဖမ်း) ချင်တဲ့သူကိုပဲရွေးဖမ်းပြီး ကိုယ့်ဖဲနဲ့ယှဉ်ပြီးအလျော်အစားအရင်လုပ်လိုက်လို လဲရသလို ဆွဲပြီးတော့မှ ဖမ်းလဲရပါတယ်။
ဒီကစားနည်းမှာ ဖဲ၂ချပ်နဲ့ 8 (သို)9ရမယ်ဆိုရင် “ဒို” လိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ ပွဲမစခင်ထဲက ဒိုတယ်ဆိုပြီးလှန်ချလိုက်လိုရတယ်။ ဒါပေမယ့် 8 ဒိုကို9ဒိုကနိုင်သလိုပဲ ဒိုအတူတူချင်းယှဉ်ရင်တောင် အပေါ်မှာရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ
ကဒ်ရဲ့တန်ဖိုးရယ် အပွင့်ရယ်ကိုကြည့်ပြီး အနိုင်အရှုးဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။
#Lucky7ရှမ်းကိုးသီး၏စည်းကမ်းများ။ #Lucky7ရှမ်းကိုးသီးဂိမ်း ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ?
NextLucky7ရှမ်းကိုးမှီး၏ စည်းကမ်းများ။-Lucky7Casino-Lucky7Shan Koe Mee-Lucky7ရှမ်းကိုးမီး